Ka Digtoonoow Cunooyinkaan Xilliga Afurka Haddii Kale .. - iftineducation.com
iftineducation.com – Qaladaad dhanka conooyinka ah ayaa ka dhaca dadka sooman ee Somalida ah iyadoo ay haboon tahay in arintaas taxadar laga yeesho , waxa ayna iftineducation ku siineysaa dhowr arimood oo qalad ah oo ku aadan dhanka cunadaada ah xilliga Ramadaanka .
1- In aad qaadato biyo aad u badan waqtiga saxuurta iyo ka hor aadaanka koowaad ee salaadda subax iyadoo dadka inta badan ay aaminsan yihiin in arinkaasi uu jirka ka ilaalinayo in uusan dareemin oon maalintaas uu sooman yahay , balse biyo badan oo la cabo xilliga saxuurta waxa uu sara u qaadayaa shaqada killidda si ay uga taqalusto biyaha taasina oon ayay keeneysa maalintii .
Hadaba iftineducation ayaa kuula talineysa in aad qaadato fruits-ka ay ku badan yihiin biyaha xilliga saxuurta sida qaraha oo kale iyo tufaaxa , waxa ayna ka shaqeynayaan in si tar tiib ah jirka biyo ugu soo shubaan xilliga maalintii ee aad sooman tahay .
2- Cabidda biyo qaboow xilliga afurka si toos ah taasina waxa ay keeneysaa in uu yareeyo dhaq dhaaqiiqii dhiigga ee caloosha tagi lahaa iyo mindhiciraha taasina waxa ay jirka u keeneysaa in dhibaato aad ka dareento dhanka dheefshiidka iyadoo durba aad ka sheeganeysid dhanka qabsiinada ama bogga .
Hadaba khubarada iftineducation ayaa kuula talinaya in aadan qaadan biyo aad u qaboow ah marka aad afurka ku jirtid adiga oo markaas ka dib qaadan kara biyo qaboow .
3- Qaadashada cunada shiilan xilliga afurka taasi waxa ay halis ku tahay caloosha iyada oo wax adag ka dhigeysa in cunada ay dheef shiidanto .
4- Qaadashada wax yaabaha mac macaanka ah ka dib afurka taasi waxa ay keeneysa in dufanku isa saarmaan taasina culeyska cayilka ayay sara u qaadeysaa , haddii aad qaadaneyso mac macaanka waxaad ka dhigataa bacdal taraawiix , sidoo kale joogto haka dhigan oo todobaadkii laba jeer kaliya .
5- In aadan qaadan Fruits-ka waa qalad waa muhiim ah in cunto maxaa yeelay waxaa ka buuxa Vitamins iyo cusbada jirka ee uu u baahan jirka xilliga ramadaanka taasi oo la dagaalmeysa sidoo kale cayilka iyo jirka uu is dhimo .